बेनी अस्पतालमै पहिलोपटक दाँतको जटिल उपचार | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्थानिय समाचार म्याग्दी समाचार बेनी अस्पतालमै पहिलोपटक दाँतको जटिल उपचार
बेनी अस्पतालमै पहिलोपटक दाँतको जटिल उपचार
२०७४, १५ माघ सोमबार १०:२१
घाँस काट्ने क्रममा रूख बाट लडेर दाँतमा गम्भीर चोट लागेका मुखको अगाडीको भागको दाँत र हड्डीमा भाँिचएको एक युवाको बेनी अस्पतालमा पहिलोपटक उपचार गरिएको छ । दुर्घटनामा दाँत र मुखमा लागेको चोट मध्यकै जटिल मानिने ९डेन्टोएलभियोलर० फ्याक्चरलाई अस्पतालमा ४५ मिनेटमा सफल शल्यक्रिया गरिएको हो ।
शनिबार दिउँसो रुखमा घाँस काट्ने क्रममा लडेर जमिनमा खसेका रघुगंगा गाउँपालिका–२ भगवतीका यूवा पवन केसीको अस्पतालका डेन्टल सर्जन डा। विवेक सुनारको नेतृत्वमा ९डेन्टोएलभियोलर० फ्याक्चरलाई जिल्लामै शल्यक्रिया गरिएको दाँत तथा मुख विभागले जनाएको छ ।
रूखबाट लडेर दाँतको अघिल्लो भाग र छातीमा चोट लागेको अवस्थामा आफन्तको सहयोगमा अस्पतालमा पुगेलगत्तै डा. सुनारले अस्पताल प्रमुख एवम् वरिष्ठ मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट डा. रोशन न्यौपानेलाई विरामीको अवस्थामा बारेमा जानकारी गराई शल्यक्रिया सुरू गरेका थिए । दाँत र मुखमा गम्भीर चोट लागेको अवस्थामा आएका घाईतेको कम्योजिट रेजिन र तारले जोडेर राखिएको छ ।
हड्डीसंगै भाँिचएको दाँतको एक्सरे, दाँतको नसा मरेको अवस्थामा जरै देखी उपचार गर्नुपर्ने भएकाले पनि एक महिनासम्म हरेक हप्ता चेकजाँचका गरिने डेन्टल सर्जन सुनारले बेनीअनलाइनलाई बताए । उनका अनुसार जिल्ला बाहिर यो सेवाका लागि ५० देखी एक लाखसम्म खर्च गर्नुपर्छ । अस्पतालमा दाँतको उपचार भएपछि घाईते केसीले उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई धन्यवाद दिए । ’जिल्ला बाहिर हुने उपचार यहाँ सम्भव रहेछ । आफ्नै जिल्लामा उपचार गर्न पाइयो, समस्या परेमा तत्काल सम्पर्क गर्न पनि सहज हुन्छ‘ उनले भने । २०७१ साल फागुन महिनामा स्थापना भएको विभागमा दैनिकजसो सेवाग्राहीको भीड लाग्ने गरेको छ ।
५० शैयाको अस्पतालमा स्तरोन्नति भए पनि १५ शैया क्षमता रहेको अस्पतालमा नियमित रुपमा २७ बेडमा उपचार हुँदै आइरहेको छ भने बिरामीको सङ्ख्या वृद्धि भएको खण्डमा लो बेडको समेत व्यवस्था गरी उपचार गर्ने गरिएको छ ।
निक साईमन्स इस्टिच्युट, प्रवासी म्याग्देली, उपचारमा खुसी भएका विरामीको सहयोगमा प्राप्त उपकरणहरुले समेत उपचारमा सहज भएको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले बताए । अस्पताल पश्चिमाञ्चलको उत्कृष्ट तेस्रो अस्पतालका रुपमा घोषित भएको थियो ।
Previous articleबेनी बोर्डिङ्ग कप: बेनी सामुदायिक सेमिफाइनलमा प्रवेश
Next articleपर्यटकलाई लोभ्याउने म्याग्दीका प्राकृतिक दृश्यहरू